kana ukasabvisa ma ios nemaapps eapps izvozvi, zvinogona kukubhadharira imwe yemari yako yawakawana zvakaoma
Kuru Nhau & Ongororo Kana iwe ukasabvisa aya maApple neApple izvozvi, zvinogona kukutorera imwe yemari yako yawakawana zvakaoma
Kana iwe ukasabvisa aya maApple neApple izvozvi, zvinogona kukutorera imwe yemari yako yawakawana zvakaoma
Sekureva kwaArs Technica , zano rakapihwa vaongorori nemwana rakatungamira mukuwanikwa kweadware uye mamwe maapplication akagadzirirwa kubvarura veruzhinji. Aya maapplication akanyorwa pane ese ari mairi Apple App Store yezvikamu zve iPhone uye neGoogle Play Store yezvishandiso zveApple. Aya mazita anoverengeka akaiswa pamusoro pe 2.4 miriyoni nguva uye achinyepedzera kupa maficha senge mifananidzo yemapepuru, zvemukati zvevaraidzo uye hova, uye kurodha mumhanzi. Mimwe yeaya maapplication akashanda kumusoro kushambadzira kunyangwe paanga asiri & apos; yakavhurika. Aya anonzi HiddenAds trojans anozvishandura semapurogiramu anobatsira, uye iwo ari. Ivo vanobatsira kune vakashata vatambi vanounganidza mari kubva kushandira iyo kushambadza kune vakauraiwa.
Zvakatora mwana kuti awane malware akaiswa pamusoro pe 2.4 miriyoni nguva
Wadii kungo buritsa ava vanonetsa iwe vaunobvunza? Mhinduro yacho iri nyore. Mifananidzo yacho yakavanzwa kuitira kuti vashandisi vagone & maapuro ekuziva maitiro ekuabvisa iwo. Kunze kwekuendesa adware, mamwe eaya maapplication anobhadharisawo $ 2 kusvika $ 10 yekutenga zvisina basa mu-app izvo zvakagadzira $ 500,000 mumari kusvika parizvino maererano nekufungidzira kubva kuapp analytic firm Sensor Tower.
Iyi inonzi yemahara app, inowanikwa muGoogle Play Store, inobhadharisa zvakaringana kuita $ 10 pavhiki kunyorera
Mamwe eaya spam / scam maapplication akasimudzirwa nevatatu vevashandisi veTikTok, mumwe wavo aive nevateveri mazana matatu. Iyo pfupi-fomu vhidhiyo app, iyo nyaya yemutambo mukuru pakati peTrump manejimendi uye iyo app & apos; s mubereki kambani ByteDance, yakaita chikamu chakakosha mukuwanikwa kweizvi maapp. Musikana akaitika kuwana mbiri paTikTok iyo yaisimudzira imwe ye'anoshusha maapplication 'ndokumhan'arira kuCzech Republic & apos; s Be Safe Online chirongwa icho chinofanirwa kubatsira vana mudunhu kugara vakachengeteka vachiri online. Paunenge uchifungisisa kusagadzikana uku, iro zano rakatungamira vaongorori kubva kune yekuchengetedza kambani Avast kuti vazvicherere voga uye yakawana maapplication gumi nerimwe achimhanya neIOS neApple aibatanidzwa mukubiridzira uku.
Avast kutyisidzira muongorori Jakub Vávra , akadaro muchitaurwa, 'Tinotenda musikana mudiki uyo akatitaurira nhoroondo yeTikTok, kuziva kwake uye kuita kwake kwakanakisa ndiko kuzvipira kwatinofanira kuratidza kuita kuti cyberworld ive nzvimbo yakachengeteka. Iwo maapplication atakawana matsotsi uye anotyora zvese maGoogle & apos; s neApple & apos; maapps nemaitiro ekuita zvisirizvo zvirevo kutenderedza maapplication anoshanda, kana kushambadzira shambadziro kunze kweapp uye kuviga iyo yekutanga app icon ichangosungirwa. Zvinotonyanya pamusoro pekuti maapps ari kusimudzirwa pasocial media mapuratifomu anozivikanwa pakati pevana vadiki, vangangotadza kuziva mimwe yemireza mitsvuku yakatenderedza maapps uye saka inogona kuvawira. Avast akawanawo nhoroondo ye Instagram ine vateveri vanopfuura zviuru zvishanu vanosimudzira maapp.
Mamwe maapplication, sekutaura kwatakaratidza, akakwenenzverwa paTikTok uye Instagram uye akaisanganisira zvinongedzo zvakatungamira kudzokera kune zvinyorwa zvavo muApp Store kana Google Play Chitoro. Uye izvo zvinotidzosera kune izvo zvatinodaidza yedu yekutanga yambiro system iyo inogona kukubatsira iwe kudzivirira kuisa malware. Ingotarisa wongororo uye kana iwe ukaona akawanda akadzika-nyeredzi makomendi anosheedzera app adware, malware, kana chimwe chinhu chakanyanya kutonyanya, ingoisiya yega. Iwo maapplication atiri kunyora nezvazvo mune ino chinyorwa aive nezvakawanda avhareji 1.3 - 3.0.
Avast & apos; s Vávra iri kunetsekana nezvevechidiki vanosangana nekusimudzirwa kwemaapp aya. `` Zvikurukuru zvine chekuita nekuti maapps ari kusimudzirwa pasocial media mapuratifomu anozivikanwa pakati pevana vadiki, vangangotadza kuziva mimwe yemireza mitsvuku yakatenderedza maapps uye nekudaro inogona kuvawira, '' akadaro. Avast anoti yazivisa Apple uye Google nezve malware anowanikwa mune avo eApp Store mafronti. Iyo yekutsvagisa kambani yakazivisawo TikTok uye Instagram nezve maakaundi ari kuita kusimudzira kweaya maapp.
Dzivisa kana uninstall anotevera maapplication:
Google Play Chitoro:
ThemeZone - Shawky App Yemahara - Shock Shamwari Dzangu
Tinya Roulette ++ Shock Shamwari yangu
Yepamoyo Mimhanzi Downloader - Yemahara Dhawunorodha Music
Shock Shamwari Dzangu - Satuna
DingindiraZone - Live Mapepuru
kuvhundutsa shamwari yangu pombi roulette v
chinja data kubva pixel kuenda pixel
renyeredzi s8 zuva rekuburitsa sprint
Apple inotangisa yakasarudzika edition 'Club Kuunganidzwa' Inorova Solo3 isina waya mahedhifoni
Cherekedza 7 S Pen yakanakisa-yakanaka bhora matipi: inokwana here paCherechedzo 5 uye Cherekedza 4 & apos; s S Pens?
Akanakisa Samsung mafoni 2021
Idzi ndidzo dzaive dzekare pafiripi nhare dzaishandiswa nemunhu wese (uye isu tinovapotsa)
Rugged: Iwo akanakisa iPhone 6 Plus zvombo zvombo
Nhoroondo yeGoogle Nexus: mudziyo weApple
Google Now Launcher inofungidzirwa kuti yakafa sezvo Google ichiita kuti isapindirane nezvinenge zvese zvishandiso
Iwe unogona ikozvino kuunza yako Galaxy foni kuXfinity Mobile
Kuratidzira kwakatyoka? Galaxy Note 7 / S7 / edge, LG G5, HTC 10, iPhone 6s / Plus / SE yepamutemo yekutsiva mitengo mitengo
U.S. Cellular inokwenenzvera kuyedza kwayo kwe5G, kutora peji kubva kuT-Mobile & apos; bhuku